Deg deg: Bisha Ramadaan oo laga arki waayay meelo badan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg deg: Bisha Ramadaan oo laga arki waayay meelo badan
Bisha Ramadaan ayaa laga arki waayay meelo badan oo ka mida caalamka Muslimka taas oo laysku raacay in la dhameeyo bisha Shacbaan oo 30 ah beri, maalinta Khamiista ahna ay tahay maalinta koowaad ee Ramadaan.
Wadamada iyagu shaaciyay ama soomaya Khamiista waxa ka mida Malaysiya, Cumaan, Ciraaq, Urdun, Baxrayn, Turkiga, Siiriya iyo Ustareeliya oo sheegay in aan lagu guulaysan in la arko curashada bisha Ramadaan.
Somaliya ayaan iyagu welli ka hadlin curashada bisha Ramadaan iyo in laga arkey gobolada dalka lagana sugayo inay war ka soo saaraan xilliga aan warkan aan qoreyno oo saacada geeska Afrika tahay 07:00 fiidnimo.
Sucuudiga oo Muslimiinta Yurub inta badan la soomaan ayaa isna sheegay in ayna suuragal noqon in la arko bisha Ramadaan isla markaana la dhamaysirayo bisha Shacbaan lana soomi doono maalinta Khamiista.
Bisha cusub ayaa la arki karaa keliya 5 daqiiqo marka cadceedu dhacdo kadib ama ugu badnaan 7 mirir sida ay sheegeen culimada ku takhasusay dhul meerayaaha dusheena.
Aduunka Muslimka ayaa badankiisu soomi doonaa habeen dambne oo Khamiisa bishuna tahay 17 Maajo.